Kedu uru na ROI na njikarịcha Search Engine? | Martech Zone
Kedu uru na ROI na njikarịcha Search Engine?
Satọde, Febụwarị 25, 2017 Satọde, Febụwarị 13, 2021 Douglas Karr
Ka m na-eleba anya ederede ochie m dere na njikarịcha njin ọchụchọ; Achọpụtara m na ọ karịala afọ iri m na-enye nduzi. Nchọpụta njinchọ nchọgharị rutere elu ya afọ ole na ole gara aga, ụlọ ọrụ ijeri kwuru ijeri rịa elu ma daa na amara. Ọ bụ ezie na ndị ndụmọdụ SEO nọ ebe niile, ọtụtụ na-eduga ndị ahịa ha n'okporo ụzọ na-enyo enyo ebe ha na-egwu egwu nyocha karịa iji ya rụọ ọrụ nke ọma.
Ọbụna m dere ụkpụrụ, cliché, na SEO nwuru anwu maka egwu nke ndị nọ na ụlọ ọrụ m. Ọ bụghị na echere m na ụlọ ọrụ ọchụchọ ahụ anwụọla, ha na-aga n'ihu na-abawanye na mkpa na mmetụta na ụlọ ọrụ dijitalụ ahịa azum. Ọ bụ na ụlọ ọrụ ahụ anwụọla, ebe ha tufuru ụzọ ha. Ha kwụsịrị ilekwasị anya n'ahịa ahịa ma, kama nke ahụ, ha lekwasịrị anya na algọridim na ịnwa ịghọ aghụghọ ule ụzọ ha n'elu.
Kwa ụbọchị, ana m enweta arịrịọ na-arịọ, na-arịọ, ma ọ bụ ọbụna na-achọ ịkwụ ụgwọ maka backlinks. Ọ dị njọ ebe ọ bụ na ọ naghị egosi nsọpụrụ zuru ezu maka obodo m rụrụ ọrụ iji wulite uru na ntụkwasị obi n'ime afọ iri gara aga. Agaghị m etinye ya n'ihe egwu maka ọkwa onye ọ bụla.
Nke a apụtaghị na anaghị m echegbu onwe m na idebe saịtị m kachasị maka njin ọchụchọ ma ọ bụ nke ndị ahịa m. Ihe ochicho njini ka na-abu isi ngbala anyi na ndi ahia anyi, ma ukwu ma obere.
Harris Myers mepụtara ihe omuma a, SEO: Gịnị kpatara azụmahịa gị ji achọ ya ugbu a?, nke gụnyere ihe isii mere ọ bụla azụmaahịa kwesịrị iji nwee usoro ọchụchọ.
Uru nke SEO
Ahụmịhe n'ịntanetị na-amalite site na ọchụchọ - 93% nke ndị ahịa nke oge a na-eji igwe ọchụchọ achọ ngwaahịa na ọrụ
SEO dị oke ọnụ - 82% nke ndị na-ere ahịa na-ahụ SEO ka ọ na-adịwanye irè, na 42% hụrụ oke ịrị elu
SEO na-eweputa oke ahia na onu ogugu di elu - 3 ijeri mmadụ na-enyocha eachntanetị kwa ụbọchị na Keywords na-akwọ ụgbọala nke ukwuu mkpa, ezubere iche nke nzube.
SEO bụ ụkpụrụ na asọmpi taa - ingnye ọkwa abụghị naanị ihe na-egosi ikike SEO na-arụ na SEO, ọ bụ ihe na - egosi ikike ikike gị na ụlọ ọrụ gị.
SEO na-enweta ahịa ekwentị - 50% nke nyocha ekwentị mkpanaaka na-eduga na nleta ụlọ ahịa
SEO na-agbanwe agbanwe mgbe niile, yabụ na ohere ya - Nchọgharị ọchụchọ na-aga n'ihu na-emeziwanye algorithms ha ma hazie ma hazie nsonaazụ iji bulie ahụmịhe ndị ahịa. SEO abụghị ihe ị do, ọ na-achọ na-aga n'ihu anya inyocha ma search engine mgbanwe na mgbalị gị compeitors.
ROI nke SEO
Ihe mbụ ị ga-echeta maka nloghachi na ntinye ego maka SEO bụ na ọ ga-agbanwe oge. Ọ bụrụ n’ịga n’ihu na-ebuli ma mepụta ọdịnaya dị ịtụnanya, ịlaghachi na itinye ego ga-abawanye n’oge. Dịka ọmụmaatụ, ị na-emepụta infographic na okwu asọmpi asọmpi na ntinye ego bụ $ 10,000 na nyocha, imewe, na nkwalite. N'ime ọnwa mbụ, ị na-eme mkpọsa ahụ ma nweta ụzọ ole ma ole ma eleghị anya ọbụlagodi otu ntụgharị na uru $ 1,000 bara uru. Gị ROI bụ kpodoro isi ala.
Mana mkpọsa ahụ enwetabeghị oke nloghachi ya. N’ọnwa abụọ na atọ, a na-edebe ihe ọmụma ahụ n’ọtụtụ ebe nrụọrụ weebụ nwere ikike dị elu ma bipụtara ya na di na nwunye. Ihe si na ya pụta na-abawanye ikike saịtị gị maka isiokwu ahụ wee bido ịmalite n'ọtụtụ okwu na ọnwa ole na ole sochirinụ. Akwụkwọ akụkọ ndị ahụ na peeji ndị metụtara ya ma ọ bụ isiokwu dị iche iche na-amalite inweta ọtụtụ narị ndu na ọtụtụ imechi kwa ọnwa. Ugbu a ị na-ahụ ezigbo ROI. Na ROI nwere ike ịga n'ihu na-abawanye na afọ ole na ole sochirinụ.
Anyị nwere otu infographic maka onye ahịa nke na-aga n'ihu na-elebara anya afọ asaa mgbe izizi bipụtara ya! Ghara ikwu banyere anyị ejirila ọdịnaya maka azụmaahịa ahịa na atụmatụ ndị ọzọ. ROI na ihe omuma ihe a di otutu ugbua!
Tags: uru nke seonyocha ọchụchọnhazi ọchụchọAuru seoagwo
Kedu ihe bụ Mmetụta nke Nyocha Ndị Ahịa Online na Azụmaahịa Gị?
Mmekọrịta Ngwakọta Ọhụrụ na Vimeo mebere ya ka ọ bụrụ ụkpụrụ maka ndị na-ese vidio